PMDG 737: degitaan gacmeed
PMDG 737: degitaan gacmeed Bilood 7 5 maalmood ka hor #1559
Waxaan bilaabayaa inaan maamulo duhurnimada '737 NGX' laakiin kuma guuleysanin inaan ku degto habka gacanta (dabayl la'aan). Qiyaastii qiyaastii 10nm waxaan jaray A / T, waxaan ku dhacey V / S = 1000ft / min, maareeya guryaha dabaqyada, oo aan beegsanayo tixraaca xawaaraha. Markaa waan ka takhalusaa AP oo diyaaradda ayaa noqota mid aan xasilloonayn oo aan sii hayn karin xayndaabka waddada.
Waxaan jeclaan lahaa inaan helo talo ku saabsan degitaanka buugga gacanta ah.
PMDG 737: degitaan gacmeed Bilood 7 5 maalmood ka hor #1560
Tababar badan. Waqti ayey qaadataa in dhab ahaan loo maareeyo gacmaha diyaaradda, oo ay kujirto soo degista. Sidookale, ka raadi YouTube talo iyo casharro ku saabsan sida loo duulo.
Degitaan farxad leh.
PMDG 737: degitaan gacmeed 6 bilood 1 toddobaad ka hor #1585
Ku farax inaad ku raaxaysato PMDG sidoo kale waan haystaa .Waxay ku qaadataa tababar badan xakamaynta gacanta. Waxaad isku dayi kartaa inaad faafiso meel ku dhow .. Dunida dhabta ah ee duuliyaasha caadiga ah ee caadiga ahi waa 500 ft. Tan waxaan ku dhaqmilahaa ilaa aad markasta nuujiso.